DKMG ah iyo Ahlusuna oo Howlgalo ka bilaabay Deg Baladxaawo – SBC
DKMG ah iyo Ahlusuna oo Howlgalo ka bilaabay Deg Baladxaawo
Posted by Webmaster on December 31, 2011 Comments
Ciidamada Ahlusuna waljamaaca iyo kuwa Dowlada KMG ah ee ku sugan Gobolka Gedo Gaar ahaan Degmada Baladxaawo ee Gobolkaasi ayaa ku dhaqaaqay Howlgalo baaritaan ah oo ay ka sameynayaan xaafadaha Baladxaawo.
Howlgalada ay sameynayaan ciidamada Labada dhinac oo wada jir ah ayaa siweyn loogaga dareemay magaalada, waxaana saraakiisha ciidamada ee halkaasi ku sugan ay xaqiijiyeen in howlgaladaas ay wadaan ay yihiin kuwo ay ku xaqiijinayaan Amaanka.
Howlgaladan ayaa waxaa lala xiriirinayaa ka dib markii maalin ka hor uu Magaaladu ka dhacay qarax aan cidna waxba ku noqon, amaan dari xiliyada habeenkii ah ay ka sheeganayeen dadka deegaanka.
Magaalada Baladxaawo ee Gobolka gedo waxaa ku sugan ciidamo kala taabacsan Dowlada KMG ah ee Soomaaliya Iyo Ahlusuna waljamaca balse waa ciidan wada jira oo Dagaal kagala soo horjeeda gobolka Xoogaga xarakada Alshabaab.
Sikastaba ha ahaatee lama xaqiijin karo in ciidamada ay howlgalkooda ku qabqabteen dad, inkastoo wararka qaar ay sheegayaan in dad loogag shakiyay falalka Amaandari ay ciidamadaasi xabsiga dhigeen.